aliyaha Ciidanka XDS oo maanta booqday degmada Cadale |
aliyaha Ciidanka XDS oo maanta booqday degmada Cadale
Taliyaha ciidanka XDS iyo mas’uuliyiin kale ayaa maanta booqday degmada Cadale ee G/Sh/dhexe oo dhawaan laga xoreeyay maleeshiyaadka Al-shabaab.
General Daahir Aadan Cilmi (Indhaqarsho) taliayaha ciidanka XDS oo ay wehliyeen xildhibaanno, gudoomiyaha gobolka Sh/dhexe iyo saraakiil ciidan ayaa manta gaaray degmada Cadale iyo tuulooyin hoos yimaada degmadaasi kuwaasoo dhawaan laga xoreeyay Shabaab.
Wafdiga maanta booqday degmada Cadale iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa waxaa ka mid ahaa xildhinaan Cumar Finish, xildhibaan Nuur Maxamed Xuseen, gudoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Guudlaawe, taliyaha ciidanka XDS “indhaqarsho” iyo saraakiil uu ka mid ahaa Gen. Qaafoow.
Meelaha ay booqdeen waxaa ka mid ahaa degmada Cadale iyo tuulooyinka kala ah, Xaaji Cali, Koogaar, iyo Raga-ceeelle, iyagoo la kulmay waxgaradka iyo shacabka ku nool deegaanadaasi, waxeyna kala hadleen sidii ay gacan uga geysan lahaayeen sugida amniga.
Sidoo kale mas’uuliyiinta ayaa u kuurgalay xaalada nololeed ee bulshada iyo baahida ka jirta deegaannada ay booqdeen, waxeyna warbixinno ka dhageysteen bulshada ku dhaqan deegaannadaasi.
Deegaannada ay booqdeen madaxda ayaaa dhawaan laga xoreeyay maleeshiyaadka Shabaab, iyadoo dadkuna ay dowlada ku amaaneen sida ay uga dulqaadday dhibaatooyinki ay mudada dheer ku hayeen maleeshiyaadka Al-shabaab.